Ihe nzuzo alụmdi na nwunye - miniseries HBO ga -ejikọ gị | Bezzia
Susana godoy | 14/09/2021 14:00 | Akụkọ
Enwere ọtụtụ usoro na -egosi na nyiwe. Mpụta izizi anaghị akwụsị ime na karịa ugbu a, na ịlaghachi na -eme mgbe oge ọkọchị gachara. Maka nke a, taa ọ bụ HBO nwere oghere anyị na ọ bụghị naanị ya mana ọ na -esonyere di na nwunye nwere ọtụtụ ihe ịgwa anyị. Ihe nzuzo nke alụmdi na nwunye bụ usoro ọhụrụ nke ahụ ga -apụ n'anya.
Ọ dị mma, ị ga -akọwapụta ihe ọhụrụ n'ihi na ọ nọ n'elu ikpo okwu mana echiche mbụ sitere na 70s, yabụ anyị na -eche mmegharị. Chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otu n'ime usoro kacha atụ anya maka atụmatụ ya, nkuzi ya mana maka ndị na -akwado ya.
1 Nzuzo nke alụmdi na nwunye, mmegharị nke usoro sitere na 70s
2 Kedu ihe usoro HBO mini gbasara
3 Ihe mgbagwoju anya nke Jessica Chastain na Oscar Isaac
4 Akụkụ ole ka Nzuzo nke alụmdi na nwunye nwere
Nzuzo nke alụmdi na nwunye, mmegharị nke usoro sitere na 70s
Ọ dị ka nrụzigharị na -abụkarị otu n'ime nnukwu ụzọ ọzọ. N'ihi na ọ bụrụ na otu echiche na -aga nke ọma, gịnị ma ị ga -aga n'ihu ịkụ nzọ na ya ma emechaa. Ọ dị mma, nke a bụ ihe na-eme na mini-series nke HBO na-enye. Ingmar Bergman dere usoro izizi. Onye a na -ahụta ka otu n'ime ndị isi kachasị mma na akụkọ ihe nkiri sinima. N'okwu a, kwuru Egburu akụkọ mbụ na 1973 wee kpọọ Liv Ullmann na Erland Josephson onye jisiri ike weghara ọha wee nwee nnukwu ihe ịga nke ọma na ọtụtụ onyinye. Ugbu a, otu atụmatụ ahụ na -alaghachi, na ikuku ikuku mana dị njikere ịga nke ọma dịka ọ dị na mbụ.
Kedu ihe usoro HBO mini gbasara
Dị ka ị pụrụ ịhụ site n'ihe e kwuru. Obere usoro a bụ maka di na nwunye nwere Jessica Chastain bụ onye isi na-eme nke ọma na ntụkwasị obi. Ọ bụ ezie na n'akụkụ nke ọzọ enwere onye mmekọ ya, Oscar Isaac onye bụ prọfesọ nke nkà ihe ọmụma ma na -achọ ihe ọ bụla na alụmdi na nwunye ha ga -aga n'ihu. Mana ọ bụ eziokwu na ọ bụrụgodi na anyị ahụ arụmụka a dị nfe, ọ gaghị adị nfe. N'ihi na ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị ahụ na -egosi anyị, site n'anya ndị na -akwado ya, ma ịhụnanya na ekweghị ekwe na ịgba alụkwaghịm, n'etiti ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ ga -eru gị n'obi.
Ihe mgbagwoju anya nke Jessica Chastain na Oscar Isaac
N'ụbọchị ndị a, a na -ekwu ọtụtụ okwu banyere njikọta dị n'etiti ha abụọ. Gụnyere na etinyere na kapeeti uhie na Venice ha wee malite ịrịa. Maka na mgbe Jessica na -ele ntụpọ anya, Oscar na -ele ya. Anya nke gbara gburugburu ụwa na nke juputara na netwọkụ site na nkwupụta kacha mma. Ihe niile gwụsịrị na ịmakụ, nsusu ọnụ na ogwe aka yana ihe mgbagwoju anya weere na ọkwa kachasị elu. Mana ka ọ ghara isi na ya pụta, ha na -ekwu ngwa ngwa na ndị na -eme ihe nkiri mara ibe ha maka ndụ ha niile, na -agakọ kọleji ọnụ. Ọ bụghịkwa ọrụ mbụ ha na -arụkọ ọnụ, yabụ na ọ na -amasị ọbụna ihe mgbagwoju anya nke nwere ike ịdị.
Akụkụ ole ka Nzuzo nke alụmdi na nwunye nwere
N'ịlaghachi na usoro ahụ n'onwe ya, ekwesịrị ịsị na ị nwere ike were marathon na rapids. Maka gịnịe usoro a nwere naanị nkeji ise. Yabụ na ọ dị ka ọ ga -enwe otu oge. Mgbe ụfọdụ ọ na -adị ha ka ọ dị mkpụmkpụ mana ọ ka mma nkenke a karịa ịgaghị agbatị akụkọ nke anyị nwere ike mechaa gwụ. Ọ na -ekwukwa okwu banyere di na nwunye ahụ site n'ụzọ ọzọ, ntụgharị nke na -eju anya mgbe niile. Ọ dị ka ọ nwere obi abụọ niile enwere ike ebe di ya na -achọ ime ka njikọ ezinụlọ ghara ịdị. N'ezie, iji chọpụta, ị ga -ahụ ya maka na ọ dịlarị na HBO
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Ihe nzuzo nke alụmdi na nwunye: Usoro HBO ị ga -ahụ